Flynas anozivisa kunonoka kwendege dzakananga pakati peKSA neSeychelles
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saudi Arabia Kuputsa Nhau » Flynas anozivisa kunonoka kwendege dzakananga pakati peKSA neSeychelles
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Investments • nhau • Kuvakazve • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Seychelles Flynas ndege
Yakaziviswa muna Chikunguru 1, 2021, kutanga kwendege dzaFlynas dzinobatanidza zviwi zveSeychelles kuenda kuHumambo hweSaudi Arabia dzakadzoserwa kune rakazotevera zuva.
Kunonoka kune chekuita nekwanisi yendege nyowani A320 Neo ndege yakapihwa kwairi kuenda.
Flynas akasimbisa kuti chirongwa chirikuenderera mberi kuti ndege iwane mvumo yeETOPS zvichitevera kuzotangirwa kushanda.
Seychelles yakagashira vakakomberedza mazana matatu evashanyi vanobva kuSaudi Arabia kubva muna Ndira 300 uye kuwedzera kwakakura kunofungidzirwa kubva mudunhu iri kana Flynas yabvumidzwa kusimuka.
Ruzivo rwakaziviswa nevamiriri veFlynas kune veSeychelles Civil Aviation Authority inoratidza kuti kudzoserwa kwendege yavo yakananga kubva kuJeddah kuenda kuMahé kune chekuita nekwanisi yendege nyowani A320 Neo yakapihwa kwairi kuenda, ichikanganisa mubhadharo wayo uye huwandu hwayo. Ndege iyi yasimbisawo kuti chirongwa chirikuenderera mberi kuti ndege iwane mvumo yeETOPS zvichitevera kutanga kwachazoitwa.
Gurukota rinoona nezvekunze uye Tourism muSychelles, VaSylvestre Radegonde, vakatsigira rutsigiro rwekuenda kwendege idzva, dzaifanirwa kushanda katatu pasvondo, kunyangwe nekunonoka kwezuva rekutanga.
"Kunonoka kumisikidzwa kwendege dzaFlynas kuenda kuSeychelles kunongova kudzoka kudiki, izvo zvatinovimba kuti vachazvigadzirisa. Zvirongwa zvedu zvemusika hazvina kana chinokanganisa uye tinotarisira kuvaona vachidzika muzvitsuwa zvedu munguva pfupi iri kutevera. ”
Padivi pake, Munyori Mukuru anouya we Dhipatimendi reKushanya, Mai Sherin Francis, vakataura kuti kunyangwe vakaodzwa mwoyo kuti Flynas haasi kuzomhara muSeychelles muna Chikunguru sezvakange zvarongwa pakutanga, kuenda kwacho kuri kutarisira kugamuchira vafambi vayo izvozvi pazvinokwanisika.
"Zvinodemba kuti Flynas haasi kuzouya kuSeychelles sezvakataurwa muna Chikunguru, asi izvi hazvititadzise kuenderera mberi nebasa redu rekuchengetedza Seychelles mudunhu. Tinofungidzira kuti zvinhu zvichagadziriswa munguva pfupi iri kutevera uye kuti kwavanoenda kuchakwanisa kugamuchira vashanyi vanobva kuSaudi Arabia nedunhu munguva pfupi iri kutevera, ”vakadaro Mai Francis.
Iyo yekuenda yakanyora vangangoita mazana matatu evashanyi vanobva kuSaudi Arabia kubva munaNdira 300 uye kuwedzera kwakakura kunofungidzirwa kubva mudunhu iri Flynas paakatanga kubhururuka kuenda kuSeychelles. Iyo ndege yaFlynas A2021 Neo ine vanokwana 320 vafambi.